Blog Shirkado cusub oo Factory - Shiinaha Blog-saareyaasha
Difaan loo isticmaalo inta badan meelaha caamka ah (oo ay ku jiraan isbitaalada, guryaha waayeelka, dugsiyada, kaniisadaha, shaleemoyinka, tiyaatarada, iyo in ka badan.) Waxaa loo baahan yahay in la shahaado sidii retardant olol. dalal kala duwan waxay leeyihiin heerarka kala duwan oo ku saabsan retardancy olol. UK: BS 5867-2: imtixaanka ololi waayo, dhar, waayo, cu ...
Hospital isugu deyayso daah waxaa looga baahan yahay in ay retardant olol (retardant dab aka ama gaabin sida FR). Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah retardancy olol. retardancy olol Temparory (TFR) la hayo by daaweynta kiimikada post-leh tolmo wanaagsan, sidoo kale iyada oo ah retardant olol dib-daahan ama darsatid dhar ...
Hospital Linen Supply iyo Maareynta Adeegyada Suuqa
Kexeeyey by baahida loo qabo bi'inta-hiilaadka caafimaadka iyo daryeelka caafimaadka casri ah oo nadiif ah, suuqa caalamiga ah ee adeegyada sahayda linen isbitaalka iyo maamulka ay u badan tahay in ay ka markhaati kaca adag ee sannadaha soo socda. suuqa, taas oo istaagay US $ 7.4 xoreynta ee 2015, waxaa lagu qiyaasay in ay ballaariso ee ...